Laghachi na kalenda nke Africa - Afrikhepri Fondation
Tuzdee, Ọktọba 20, 2020
Cdika o kwesiri idi, anyi n’eme emume a 1er Djehouty 6250 New Year Kamit or African (nke a 19 July 2013 nke kalenda Gregorian). Ihe ijuanya dị ka ọ pụrụ iyi, e nwere kpọmkwem 6250 afọ nna nna anyị hà ike mbụ na kalenda ndị mere eme nke mmadụ. N'ezie, mepụtara nke kalenda ụbọchị 4236 tupu afọ efu na Gregorian kalenda ma ọ bụ 4236 BC The Gregorian kalenda ke ẹkenam ke October 1582 na Rome site Pope Gregory 8. The France nakweere ya na December 1582, Britain na 1752, 1918 Russia na Greece 1923. The Kamit kalenda bụ mkpụrụ nke ogologo afọ nke chọpụtara na ndekọ nke nkà mmụta mbara igwe phenomena searches (okirikiri nke kpakpando) na eke (n'oge a kara cycles), nke e jikọtara ya na oge nke agha na owuwe ihe ubi.
Na ajụjụ a, site na igosi onye Ijipt, nke ahụ bụ ikwu kamit ma ọ bụ onye si Africa nke kalenda, Cheikh Anta DIOP ga-abụrịrị ala maka ọgbọ dị iche iche; ọ ga-ekwu, sị: "Banyere geometry, ndị Ijipt bụ nanị ndị na-emepụta kalenda nke kalenda, otu, nke na-agbanwe agbanwe, nke na-achịkwa ndụ anyị taa, na nke Neugevauer na-ekwu "na ọ bụ nanị otu kalenda nwere ọgụgụ isi nke dịworo n'akụkọ ihe mere eme mmadụ" ...
"Ha mepụtakwara afọ 365 ụbọchị ma na-agụnye: 12 ọnwa 30 360 ụbọchị = ụbọchị, plus 5 ụbọchị epagomenal, onye ọ bụla kwekọrọ na ọmụmụ nke otu n'ime ndị na-esonụ chi ndị Ijipt Osaịris, Horus, Seth, Isis na Nephthys. Ndị a bụ nnọọ ndị na-ga-amụ ụmụ mmadụ na usher na akụkọ ihe mere eme okirikiri oge Adam na Iv bụ nanị mbubreyo Bible eke nke Osaịris na Isis ...
« N’aka nke ozo, anyi mara ugbu a na, na 4236 BC. AD, ndi Ijipt ebuputala kalenda dabere na nbili elu nke helithal nke Sothis ma obu Sirius (kpakpando nke kachasi nma nke elu-igwe), na dika oge ya bu 1
N'ezie, ndị Ijipt maara afọ abụọ: ụbọchị 365 na ụbọchị 365 ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ ...
"A na-ekewa afọ ahụ na ọnwa 3 4, ọnwa na 3 10 izu, nke na-adịghị adaba na ọnwa; ụbọchị na 24 awa ...
"Kama igbakwunye ụbọchị ọ bụla n'ime afọ anọ ọ bụla na ịmalite afọ ụra, ndị Ijipt họọrọ ihe ngwọta dị mma nke na-esote ọdịiche a maka afọ 1460 ...
"The Fero kere a ije ozi edu Grand Vizier, kachasi ala ukara, na raara onwe nanị chọpụtara nke Sirius sunrises: na Ijipt-enyocha mbara igwe guzobere tebụl nyochaa kwa afo na ọdịiche dị n'agbata afọ nke kalenda obodo na afọ nke kpakpando bụ nke e mere atụmatụ ihe mere eme, dị ka usoro nke usoro oge zuru ezu ...
«Ya mere ruo ugbu a, ya na kalenda nke ndị Ijipt, bụ nke a pụrụ ịmaliteghachi, ụmụ mmadụ, n'ọnọdụ ọbụla, Africa nwere ọtụtụ usoro oge zuru oke tupu oge Ndị Kraịst, Hegira, ihe dị iche iche akara ama dị ezigbo mkpa "(Civilization or Barbary, 1981).
Ọnwa nke afọ na Medu Neter nke doro anya na matrik niile nke asụsụ Kamit bụ: Djehuty, Pa Ipet n, Hout họrọ ya ka Ka, Ta aAbet, n Mekherou Pa, Pa n Iman Hotepu, n Rennout Pa, Pa n Khonsou, Pa n Inet, Ip ipi, Ra Mesout.
Ụbọchị 5 a maara dị ka ụbọchị epagene, maka ma onye nyocha ma onye nkịtị, nke kachasị mkpa n'afọ. Ha na-edekọ na ọmụmụ nke ndị isi chi Kamit (ebe a anyị anaghị ekwu banyere echiche nke Chineke n'okwu Abraham). N'ikwu eziokwu, nke a bụ akụkụ nke anyị na-ahụ njikọ ụmụ mmadụ, nke ime mmụọ ma ọ bụ nke sayensị nke, na ọkwa ụmụ mmadụ, na-achị achị. Amalite ịmụ ma ọ bụ mmepụta nke chi ndị a bụ ịrị elu nke heliakal nke Sopdet (Sirius) nke ụbọchị 5: ọ bụ New Year Kamit ma ọ bụ Afọ Ọhụrụ Afrịka. Ya mere anyi nwere:
- 26 Mesout Ra (14 July): Ọmụmụ nke Ousire (Osiris)
- 27 Mesout Ra (July 15): ọmụmụ nke Horo (Horus)
- 28 Mesout Ra (16 July): ọmụmụ nke Setou (Seth).
- 29 Mesout Ra (17 July): Ọmụmụ nke Aissatou (Isis)
- 30 Mesout Ra (18 July): ọmụmụ nke Nabintou (Nephtys)
- 1er Djehouty (19 July): Afọ Ọhụrụ Kamit
Ọrụ na nnoo sedentary na agrarian ọha mmadụ, afọ na Kamit na-punctuated site oge na mmekọrita mmiri ozuzo nke n'aka nke na-ekpebi oge agha na owuwe ihe ubi. Ugbua na Meri Meri (Ijipt oge ochie) ka e kewara ya na oge 3. N'ịga ederede na kalenda Gregorian, anyị nwere:
- AKHET (Iju mmiri ahụ, ọnwa 4 mbụ), si 19 July na November 15
- PERET (nlọghachi), 16 November na 15 March
- CHEMOU (obere mmiri, owuwe ihe ubi, oge ọkọchị), 16 March na 13 July.
Dị ka ọtụtụ asụsụ ndị Kamit, ọnwa ndị Bassa na-asụ bụ akụkụ nke semantics nke omenala agrarian (ugbo). N'iburu n'uche asụsụ Bassa ugbu a bụ ọnwa nke afọ ka edepụtara na tebụl dị n'okpuru, akụkọ ahụ bụ nke ikpeazụ. Mkpakọrịta na kalenda Gregorian bụ ihe ize ndụ na-achọ ka a kpachara anya. Nchịkọta nchịkọta nke ihe ọnwa ndị a pụtara na-egosi na Afọ Ọhụrụ dị mma n'etiti ọnwa Hilônde, Njéba na Hikañ, ebe ọ bụrụ na ịchọrọ n'etiti June, July na August. Anyị na-akọwa onwe anyị.
Hilônde apụtaghị na June ma ọ dị mma mmalite nke oge ezo ". Njéba ọ pụtaghị na Jọshụa (nke sitere na Julius banyere Emperor Julius Caesar). Njéba pụtara " nkwadebe ala na kwa ọnwa nke ịgha mkpụrụ, ọnwa nke ịgha mkpụrụ ". Hikañ apụtaghị n'Agọst (nke dị na ya banyere Eze Ukwu Rom Augustus). Na Bassa, Hikañ pụtara " ezigbo mmiri ozuzo ". Dipos apụtaghị Septemba (nke sitere na asaa, n'ihi ịbụ ọnwa 7 nke kalenda Rom). Dipos pụtara "Oké mmiri ozuzo ". Biôôm apụtaghị October (nke sitere na asatọ, octo, n'ihi ịbụ ọnwa 8 nke kalenda Rom). Biôôm pụtara " ọnwa na-ezo mmiri ehihie na abalị ". Maye Sep ọ pụtaghị na November (nke na-abịa site na novem n'ihi ịbụ ọnwa 9 nke kalenda Rom). Maye Sep pụtara " mmalite nke oge ọkọchị.
Libui na nyéé
O doro anya na n'etiti ọnwa Hilônde et Biôôm anyị nọ n'etiti oké mmiri ozuzo, site na nke idei mmiri nke nnukwu osimiri dị ka Naịl na-eri si n'ime kọntinent ahụ site n'Oké Osimiri Ukwu. Anyị dị mma n'oge AKHET (idei mmiri) nke kalenda oge ochie nke Ijipt. Mgbe ha gesịrị data ndị a, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya iji mee ka afọ ọhụrụ Africa dị na ya 1er Djehouty ma ọ bụ 1er Njeba (19 July).
Afọ ọhụrụ anyị jikọtara ya na mkpụrụ germination (renaissance). Cheta na mkpụrụ na cuttings aghaghị ịnwụ ka a mụọ ya site na mmiri ozuzo mbụ. Nke a bụ eziokwu nke Chineke Kamit Ousiré (Osaịris), nnọchianya nke ahịhịa, nke nwụrụ anwụ na-ejikere ịlọ ụwa na ebube ekele na-elekọta nwunye ya Aissatou (Isis) nyere aka Nabintou (Nephthys). Aissatou na Nabintou nwere ike ijikọta mmiri ozuzo nke mere ka Ousiré laghachi azụ. Nke a, dị ka i nwere ike ikwu, amaliteghachiri na mmegharị nke Roman Catholic Christianity site na ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs Kraịst; mbilite n'ọnwụ nke Mary (onye sitere na "Mary" aha ọzọ nke Aissatou) ga-achọpụta. Anyị na-aga n'ihu na nyocha na ntụziaka a. Ozugbo a kwụsịrị, ọbụna ndị kacha nwee obi abụọ ga-eche ihu.
AKAM AKAMEYONG dere : « The n'ibu mgbanwe site a afọ ọzọ aghọwo a eziokwu nke ọdịbendị o banality, oge a na-mmadụ nwere taa dị ka a ekele Nwa oge, onyinye, ihe niile amuma na ezi ebumnobi na o kwere omume mkpụrụ obi a na-agba ume na-eme onwe ha ka ha nwee ike ịtọha onwe ha maka ụbọchị 365 ọzọ. Ihe na-adịghị mma na-enye ohere ịchọta ọchịchọ, na-enweghị isi mgbe otu na-ekwu na maka ọtụtụ akụkụ, ịchọ iche iche aka ike, ndị na-ịzụlite onwe-mmata na-eme ka ọtọ oru mmeri nke ọdịnihu ha nwere onwe ha akwụkwọ na usoro, na kalenda bụ a kwa ụbọchị na ndekọ ndị a societal rhythms...N'ihi ya, kalenda na-aghọ a dị ike okwu na atumatu na-enweghị atụ osisi ike nke nekpughe dị ka mgbe, okwu na onwe ya na ndị ọzọ, na-ekwu banyere akara aka, ya gara aga, ya ebumnobi, ya mmiri "(Anyị ga-alaghachi na Kalinda Kalịnda nke ndị Ijipt na-agbanwe agbanwe? 2004)
Kalịnda dị oké mkpa na mmepe na nhazi nke mmepeanya. Maka kamit, ndị Afrika, ọdịda nke mmepeanya ga-eduga ma ọ bụ mbibi nke ntọala nke obodo anyị; n'ezie kalenda ekwughị. Ajụjụ banyere ma anyị kwesịrị ịlaghachi na kalenda nke ndị nna nna anyị anaghị ebili. Iweghachi kalịnda nke ga-achịkwa ọha na obodo ndị Kamit abụghị nke kachasị na ọrụ. Ụfọdụ na-arụ ọrụ na ya. Ihe isi ike, nke na-eme ka ha ghara ịda mbà n'obi, na-egosipụta nnọọ mkpa ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na otu ọgbọ ghọtara nanị otu ihe a, anyị nwere ike, n'enweghị ihe ize ndụ nke ịbụ ndị na-ezighị ezi, na-ekwu na ọ kwadoro ozi ya. Nhazi nke kalenda bụ ihe ama nke ndị mmadụ na-ele anya n'ọdịnihu. Culture dị ka nne anyị asụsụ, okpukpe anyị, aha nke ebe na ndị mmadụ, anyị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị usoro ike nọgidere na-enwe na-enweghị nkwado nke a kalenda. Ọ bụ site na oru, na isi ihe, ememe, Ememe, tributes ka nna nna na ndị niile na ndị niile na ndị raara ndụ ha n'ozuzu ọdịmma ka ebe nchekwa na omenala na-ịdịgide .
Ezi Afọ Ọhụrụ 6250. Ka anyị taa na echi bụrụ ndị ruru eru maka ndị bịara n'ihu anyị ma nye anyị ihe dị ukwuu iji nọrọ ebe a taa.
Dịka kalenda Gregorian nke ụbọchị 25 nke ọnwa Disemba (“ọmụmụ” nke Kraịst ma ọ bụ ncheta nke anyanwụ) bụ ụbọchị ekeresimesi, anyị na-eme emume na kalenda ndị Africa. na July 14 ('Ịmụ' 'nke Osire ma ọ bụ Mbilite n'Ọnwụ nke Re)
Na kalenda Gregorian agba afọ ọhụrụ ahụ na 1 January na anyị ga-eme ememe AKWỤKWỌ ANYỊ KWURU 19 July.
Ọnụnọ nke ndụ metụtara, site na ntụrụ ime ruo ọmụmụ (Video)
Gịnị bụ ekpere na ntụgharị uche
Ọdịnihu nke ndụ n’ụwa - Hubert Reeves (Video)
Etu esi akwado Saka Saka?